Kenya oo bixinaysa qarashka caafimaad ee dhibbanayaashii qaraxa ku dhawacmay - Sabahionline.com
Kenya oo bixinaysa qarashka caafimaad ee dhibbanayaashii qaraxa ku dhawacmay Maajo 30, 2012
Dawladda Kenya ayaa bixinaysa biilashii cisbitaalka ee dadkii ku dhaawacmay qarixii Isniintii ka dhacay Moi Avenue ee Nairobi, Raysal wasaare Raila Odinga ayaa sidaa sheegay Talaadadii (29-ka May.) Qodobbo la xiriira
Sawirrada 4 Kenyan ah oo looga shakiyay argaggixsannimo oo la soo bandhigay
Bilayska Kenya oo baadi-goob ugu jira qof looga shakisanyahay in uu ka dambeeyay qarixii Nairobi
"Waxaannu dadlkii dhaawacmay u rajeynaynaa in ay degdeg u bogsadaan, iyaga iyo kuwii hantidoodii ay qaraxa ku luntayba,” ayuu yiri Odinga, sida ay sheegayso Capital FM News-ta Kenya. “Waxaan amar ku baxiyay in ay dawladdu bixin doonto qarashaadka ku baxaya dhamaan dadkii qaraxa ku dhaawacmay.” Odinga ayaa dadka reer Kenya ugu baaqay in ay soo sheegaan wixii xog ah ama xuuraan ah oo ku saabsan qaraxa. Muwaaddiniintana ku boorriyey in ay bilayska siiyaan waqti ay ku baaraan qaraxa. "Diiwaannada dambiilayaasha waa ay furnaan doonaan abidkood,” ayuu yiri. “Dhabtii in aan haatan dembiilayaashii la soo joojin micnaheedu maaha in aan berri la soo joojin karin. Maahan su’aal ku saabsan saacado iyo maalmo, waxaa jira go’aan lagu gaarayo gunta arrinta.” Bilayska ayaa fiidnimadii Talaadada sheegay in ay ku raad-joogaan labo tuhmane oo lala xiriirinayo qaraxa, shaaciyeyna sawirka Emra Erdogan oo la rumaysan yahay in uu yahay muwaaddin Jarmal iyo Turki midkood ah, sida uu sheegay afhayeenka bilayska Eric Kiraithe. "Emrah Erdogan ayaa la rumaysan yahay in uu Kenya ka soo galay dhinaca Gaarisa isagoo Soomaaliya ka yimid 3-dii May, lagana yaabaa in uu weli dalka gudihiisa ku sugan yahay,” ayuu yiri Kiraithe. “Qof kasta oo xog haya waa in uu xogtaa u gudbiyaa saldhigga bilays ee ugu dhaw.” Kenyatta National Hospital ayaa fasaxay 23 ka mid ah 38 qof oo ku dhaawacantay qarixii Isniintii, iyadoo midna loo beddelay Nairobi Hospital. Muxuu kula yahay qoraalkan?